«Manani-bohitra ny Croix-rouge Malagasy» : hazakazaka efatra sosona amin’ny alahady | NewsMada
«Manani-bohitra ny Croix-rouge Malagasy» : hazakazaka efatra sosona amin’ny alahady
Hotanterahina ny alahady 8 avrily ho avy izao, ny hazakazaka karakarain’ny vokovoko mena malagasy ka nampitondraina ny lohahevitra hoe : «Manani-bohitra ny Croix-rouge malagasy». Karazana hazakazaka efatra sosona no hotanterahina amin’ity ka hisy ny 42 km sy ny 21 km, hiala etsy amin’ny kianjan’Alarobia. Eo koa ny 10 km sy ny 4 km, hiainga eny anoloan’ny lapan’ny Tanàna Ambohimanga.
Hahatratra 600 mianadahy mianaka ireo handray anjara amin’ity. Marihina fa hotolorana amboara ireo ho mpandresy amin’ity. Nambaran’ny tomponandraikitra fa nosokafana ho an’ny olon-drehetra ny fifaninanana, izay hampivondronana ireo sokajin’olona samihafa na manan-katao na ireo sahirana.
Tanjon’ny Croix-rouge malagasy, ny hanomezana lanja ny asan’izy ireo, eny anivon’ny fiarahamonina ary koa hanalefahana ny fanaintainan’ny mpiara-belona. Araka izany, ho fetibe ho an’ny rehetra tokoa ity hazakazaka manani-bohitra ity. Porofon’izany, natokana ho an’ireo ankizy any amin’ny sekoly ny halavirana 4 km, ampianarana azy ireo hihazakazaka sy ho tia izany.
Tsiahivina fa eny amin’ny tokontanin’ny lapan’ny Tanànan’Ambohimanga hatrany ny fahatongavana, ho an’ireo hazakazaka efatra tonta, ireo.